"Badheedh Ayaan Ugu Dhuftay Sergio Ramos, Waxay Ahayd Waqtigii Aan Uga Aar-goyn Lahaa Saaxiibkay Mohamed Salah" - Gool24.Net
“Badheedh Ayaan Ugu Dhuftay Sergio Ramos, Waxay Ahayd Waqtigii Aan Uga Aar-goyn Lahaa Saaxiibkay Mohamed Salah”
August 21, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Difaacii hore ee Liverpool ee Dejan Lovren ayaa qirtay inuu si badheedh ah madaxa ugaga dhuftay gacanta sannadkii 2018 si uu ugu geysto dhaawac maadaama uu difaaca reer Spain hore gacanta uga jabiyey saaxiibkii Mohamed Salah finalkii Champions League ee 2018.
Dejan Lovren oo raadinaya fursad uu ku helo Sergio Ramos si uu ugaga aargudo Mohamed Salah ayay xulalka Spain iyo Croatia bishii November ee 2018 iskaga hor yimaaddeen tartanka UEFA Nations League, waxaana ciyaartan oo ka dhacday magaalada Zabreb ku badisay 3-2 Croatia iyadoo Lovren uu dhulka ugu tuuray Sergio Ramos oo uu suxul kaga dhuftay madaxa xilli ay wada boodayeen.
Lovren oo Liverpool ka tegay xagaagan, kuna biiray naadiga Ruushka ah ee Zenit ayaa si dhab ah u qirtay in ficilkiisu ahaa aargoosi uu kula kacay Ramos oo isaguba jabiyey Mohamed Salah, waxaanu yidhi: “Si badheedh ah ayaan ugu dhuftay Ramos kaddib markii uu dhaawacay Salah? Haa, tani waa suurtogal.”
Lovren oo u warramay Egypt Today, waxa uu intaa ku daray: “Ma doonayo inaan sameeyo sheeko weyn, laakiin waxa ay ila tahay in wixii uu Ramos sameeyey uu ugu badheedhay inuu dhaawaco saaxiibkay, sidaa darteed, waxay ahayd waqtigii aan siin lahaa abaalka wixii uu sameeyey.”
Luka Modric ayaa isku dayay inuu sheekada qaboojiyo markii uu Sergio Ramos si cadho leh kaga falceliyey gacanta ku dhacday, waxaana Lovren oo kasii sheekaynaya uu yidhi: “Luka Modric ayaa isku dayay inuu dejiyo xiisadda aniga iyo Ramos u dhaxaysay, waxaananu waajahaynay Spain labadayada oo xulka qaranka Croatia ah, waxaanan si badheedh ah ugu dhuftay Ramos jiqilkayga, waxaanan u sheegay in hadda aanu barbarro nahay.”
Inkasta oo dhacdani ay dhex martay Lorven iyo Ramos, haddana waxa uu difaacan hore ee Liverpool ku dooday inuu ixtiraam u hayo kabtanka Real Madrid, waxaanu yidhi: “Waan ixtiraamaa Ramos ciyaartoy ahaan iyo wixii uu u qabtay kooxdiisa. Koobab badan ayuu ku guuleystay, laakiin dhinaca kale, wuxuu sameeyaa dhaqamo aanan jeclayn, waxaanu waxyeello u geystaa ciyaartoyda.”
Ka hor intii aanu dhaawacmin Mohamed Salah, Liverpool waxay ka ciyaar wanaagsanayd Real Madrid, waana sababta ay Liverpool u aaminsan tahay inay koobka ku guuleysan lahaayeen haddii aanu xiddiga reer Masar bixi lahayn.
Lovren oo arrintan ka hadlay ayaa yidhi: “Anaga ayaa ka ciyaar wanaagsanayn Real Madrid ka hor intii aanu dhaawacmin Salah finalkii Champions League. Bixitaankiisa ayaa dhaawac weyn nagu noqday, kaddib bixitaankiisii, waxay bilaabeen inay ciyaarta naga qabsadaan.”
Difaaca reer Croatia, waxa la weydiiyey wixii uu Mohamed Salah ku yidhi kaddib markii uu Sergio Ramos uga soo aargooyey, waxaanu ku jawaabay: “Idiinma sheegi doono wixii uu yidhi (Mohamed Salah) laakiin wuu qoslay.”